Mourinho Oo Ka Hadlay Hadii Ay Isku Dhaceen Pogba Xili Uu Amaan Ugu Qubeeyay Wiilkiisa » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ England/Mourinho Oo Ka Hadlay Hadii Ay Isku Dhaceen Pogba Xili Uu Amaan Ugu Qubeeyay Wiilkiisa
Manchester United ayaa qiimo lacageed Rikoor ah waxay kula soo saxiixatay Paul Pogba, kaasoo markii ugu horeysay tan iyo imaanshihiisa shaxda koowaad kasoo muuqan waayay kulankii ay garaaceen Huddersfield.
Arrintaan ayaa dhalisay guux faro badan, taasoo ay ku sheegeen warbaahinta dalka UK, inuu jiro khilaaf hoose oo ka dhex-qarxay Mourinho iyo laacibkaan reer France, laakiin macalinka reer Portugal ayaa ugu dambeyn ka hadlay.
Mourinho ayaa cod dheer wuxuu ku sheegay in uusan jirin wax dhibaato ah oo labadooda dhex-yaalay isagoona hoosta ka xariiqay in wiilkaan dabeecad ahaan, ciyaaryahan ahaan iyo wax walba inuu ka wanagasan yahay.
Wuxuu yiri: “Wuxuu ka helaa tababarka, waa ciyaaryahano caalami oo ah fiican, todobaadkii hore [markii uu keydka dhigay] ma jirin wax isbedal ah, dhaqan ahaan waa mid aad u wanaagsan isaga.
“Tababarka waa uu ku wanaagsan yahay, waligey xitaa hal Mushkilad kamala aanan kulmin, mana ka shalaaynayo inuu sheego inuu yahay xidig caalami ah, maxaa yeelay waa uu yahay,” ayuu sii daba dhigay.
“Waa mid aad u adag inaad hesho xidig Pogab oo kale, waa mid aanan qabin wax dhibaato ah, waana ciyaaryahan dhexda ka dheela oo dhameystiran, marka hadii Paul haysto, waa wax walba waan haystaa,” ayuu kusoo gaba gabeeyay.